Nzira yekugadzirisa Cydia "yakundikana kutora" neIOS 9 | IPhone nhau
Nzira yekugadzirisa Cydia "yakundikana kutora" neIOS 9
Vazhinji vashandisi vakasangana nedambudziko diki mushure meJailbreaking Pangu kuenda kuIOS 9 pamafoni eApple kubva kuMac OS. Cydia painotanga kuvhurwa uye data rikaonekwa richimhanya mune zvisiri zvinyorwa, chinyorwa uye chirevo chinoshamisika chinoita sekuti "Atadza kutora"Padhuze nekodhi iyi" http://apt.saurik.com/dists/ios/1240.10/main/binary-iphoneos-arm/Packages.bz2 "kukanganisa uko kuri kuita kunge kuri kudzokorodza. Nemhosho iyi, Cydia haikwanisi kurodha zvese zvinodikanwa, pamwe nemapakeji, saka hazvigoneke kuisa maTweaks matsva, nekudaro Jailbreak haina kushandira chero chinhu, ndosaka muActualidad iPhone isu tichikubatsira iwe kuzvigadzirisa.
Nzira yekugadzirisa "Yakundikana kutora" muCydia
Mhinduro yacho isinganzwisisike, zvekuti tichazozvinyengera. Chekutanga pazvinhu zvese chatinofanira kuita kuita kuti WiFi isashanda uye chinja kushandisa mobile data. Saka sara WiFi, asi usazvidya moyo, kushandiswa kwedata kuchave kushoma. Iye zvino tichaenda kune iyo "Zvinyorwa" chikamu uko kwatinoona matura uye tinya pane "Gadziridza" kana "Refresh" bhatani. Mushure mekuvandudzwa uku kwaitwa, mapakeji akarongedzwa nenzira kwayo uye isu tinogona kutaura kuonekana nedambudziko iri.
Hatizive kuti nei chaizvo Cydia ichishanda nemazvo nharembozha uye ichitadza neWiFi. Izvo zviri pachena ndezvekuti kubva Pangu nemumwe weChinese shamwari vakauya kuzotonga Jailbreak, iko kuteedzana mushure meimwe mabugs uye zvikanganiso, saka pachezvake kupunzika kwejeri kuri kunditorera mufaro mushoma. Kusavimbika chete hakukurudzire kuti ndiishandise zvakanyanya.
Ndinovimba hunyengeri hwakareruka hwakakubatsira kuti uwanezve Cydia kubva mukukanganisa kwakajairika kune avo vanoita Jailbreak kubva kuMac OS X, zviri nyore, ndosaka tisina kuipa nhanho nhanho. Kana iwe uine chero mibvunzo, bhokisi rehomwe nderewe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Nzira yekugadzirisa Cydia "yakundikana kutora" neIOS 9
Izvo hazviitike kubva kumahwindo ???
Maitiro ekudzima ese ma ziviso ne 3D Kubata Kujekesa Notifications
Yekutanga kunyorera kweTVOS inotanga kuoneka